7'S Ọkụ | cha cha UK
Ịgba Cha Cha ụlọ ọrụ bụ replete na online egwuregwu na na-kwajuru na amara atụmatụ. Ma mgbe a na mgbe na-abịa a oghere na-elekwasị anya naanị na-esi anwụde na akara na ka bụ uru na ụtọ. 7'S Ọkụ bụ otu ndị dị otú ahụ n'eleghị aghara aghara UK Mobile Ohere mepere game.
Banyere Developer nke 7 nke Ọkụ
Scientific Games bụ a ma ama na soplaya nke ọdịnaya-chụpụrụ, elu-edu Ịgba Cha Cha ngwọta na mba lọtrị na usoro egwu egwuregwu ụlọ ọrụ. Nke a UK mobile ohere mpere game bụ ihe ọzọ na egwuregwu na-akpali si ụlọ ọrụ.
ka UK mobile ohere mpere game amalite, otu ihe nke ga-eguzo bụ egwuregwu isiokwu nke bụ ọkụ. Ya mere, i nwere na-esi anwụde megide backdrop ọkụ oroma ọkụ. The akara egosipụta na-esi anwụde n'ịkwado ochie isiokwu nke egwuregwu. Onye ọ bụla na akara mejupụtara abụọ na abụọ nke ihe oyiyi ọnụ. Ya mere, ị na-ahụ anyụ wedges na abụọ Ogwe, kpakpando na hey, oroma na cherị na plums na lemons. Atọ plums na lemons na atọ oroma na cherị ga-enye gị ihe 8 ugboro multiplier. Atọ nke anyụ wedges na abụọ Ogwe Onyinye ị a 20 ugboro multiplier. Atọ kpakpando na hey abịa na a 40 ugboro multiplier. Kasị akwụghachi ụgwọ akara na-abịa na abụọ, a di na nwunye nke 7. Otu n'ime ndị a 77 bụ a nkịtị red acha akara ma ndị ọzọ 77 na-na-ere ọkụ na-agba na-abịa site na ya. 100 ugboro multiplier bụ ọdịda ma ọ bụrụ na ị na-ala atọ mfe 77 oyiyi na ọdịda atọ na-ekpo ọkụ 77 oyiyi-unu kasị elu payout of 250 ugboro gị eto.
The ndị ọzọ na atụmatụ nke a UK mobile ohere mpere bụ:
Hi ala spins- Dị ka e nweghị ikposa akara, ọ bụ gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịga maka bonus gburugburu. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi na-egwu na nke a mma mgbe ị dị nwere pịa na Hi ala button n'ihuenyo. Ị ga-enweta ise extra spins ebe na-ekpo ọkụ 77 icon replaces other symbols present on the reels.
Gamble Njirimara- The UK mobile ohere mpere game nwekwara obụrede mbụre nke a Gamble feature na ike ga-n'ọrụ mgbe a atụ ogho site na ịpị Gamble button. Ọ bụrụ na ị na-emeri unu nweta okpukpu abụọ nke ihe mgbe ahụ, gị payout na bụrụ na ị na-atụfu mgbe ahụ ihe niile na-anọgide otu.
Nke a classically imezi oghere atụmatụ ịtụnanya ndịna tinyere catchy soundtrack. 7'S Ọkụ enye a payout nke banyere 95.1% ya egwuregwu.